Brondirovanie izinwele. ubuchwepheshe brondirovanie.
Okwamanje, izwe lobuhle fashion engokwemvelo, bafunde nangendlela engokwemvelo. Ngakho-ke, entsha izinwele Umbala ubuchwepheshe - brondirovanie ngokuqinile wathatha endaweni yayo izwe lobuhle zesifazane.
Kuyini izinwele brondirovanie
Brondirovanie izinwele - multi-umbala ubuchwepheshe, sibonga lapho izinwele bheka yemvelo futhi unempilo. Ngamanye amazwi, lokhu Umbala ezintsha, okuyinto ine umphumela curls yemvelo. Lokhu Umbala izinwele kungaba kokubili izinwele ezinde futhi iDemo. Brondirovanie izinwele ezimnyama ngenxa ekhethwe kahle imibala imicu zibukeke ukunyusa ivolumu izinwele. Futhi kungaba kusiza misa umbala kwesikhumba, ukuze agcizelele ukuthi imiva samehlo. Le nqubo kudala nomphumela ekuvuseleleni kokuphelele kokubili ukubukeka kwakho futhi kukunikeza izinwele ukubukeka enempilo.
Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona brondirovanie:
Classical - izinwele umbala ngemibala emithathu: izimpande lube umthunzi mnyama amathiphu izinwele ziya hlandla. A maphakathi no-toned e umbala isizinda. A shintsho abushelelezi shades zibukeke kudala umphumela imicu yemvelo wokushiswa.
Zone: inguqulo yakudala yengezwe dark umbala ukukhanya ukukhanya, noma izinwele ukukhanya nokubiyela upende i ubuso okusaqanda noma nje imicu ambalwa ukunikeza ezengeziwe ukukhanya ithoni.
Effect Ombre Izinwele Color - play bushelelezi umbala kusuka amnyama izinwele bleached izimpande amathiphu.
Ngokuyinhloko, ukudaya umbala - chocolate, ikhofi, onsundu, ukukhanya esinsundu, izikali segolide oluxube encane blonde. Kungenzeka kukhona ezinye inhlanganisela yemibala kanye shades, njengasezulwini "BROND" lungatholakala kusuka kunoma iyiphi umthunzi izinwele. Brondirovanie ungakwenza kokubili izinwele eqinile nenempilo, kanye alimele ezidwetshiwe noma ezingokwemvelo.
Ngo ubuchwepheshe brondirovanie is kahle akhethiwe inki shades, umehluko phakathi engesiyo imibala ezingaphezu kwezintathu. Amalokhi bleached kumele itholakale ezingaphezu kweyodwa isentimitha kusukela ezimpandeni izinwele, ephelele ukuqala ngamasentimitha amathathu. Lapho imibala ekhetha kufanele bacabangele umbala amehlo, izinwele kanye isikhumba ithoni. Iningi ngokuvumelanayo ukhethe shades eziyisisekelo ukuthi sekuseduze ukuba umbala zemvelo.
isigaba Preparatory e ubuchwepheshe izinwele brondirovanie:
- uma uboya simnyama ngombala, basuke elicwengwé ukuba umthunzi ukuxegiselwa umbala,
- Uma ukukhanya izinwele, ke basuke mnyama a shades ezimbalwa futhi ahambelana inqubo "glazing", bese ingcoliswe kuphela amathiphu curls,
- uma uboya has zemvelo ukukhanya umbala onsundu, uphuzwe njengesisekelo.
Ngemva ekutholeni umbala isizinda imicu izinwele. Kungcono uma kungukuthi ngesineke nombala (asymmetrically), khona-ke umphumela uyoba lemvelo izinwele umbala. Ukuze izinwele kwakuyisibonakaliso nesigayegaye, isidingo staining uzoshiya emuva kusukela ezimpandeni ngamasentimitha amathathu. Ngokwesilinganiso, kulesigaba, ukuze shades ukuhwebelana babe bushelelezi, upende Akuthathi imizuzu engaphezu kuka-40.
Ubuchwepheshe izinwele brondirovanie ulula, kodwa ekhaya akufanele ukuba ukuzama ukuzenza njengoba kungekho isipiliyoni Ukukhetha ngidwebe ngopende kanye nokwenza imifanekiso ukuze uyibonise ekhethekile ubunjiniyela staining, Umbala ultra imfashini ngeke zisebenze. Re brondirovanie izinwele kwenziwa nengxenye noma izinyanga ezimbili. Ukuze ulungise yi etholwe, kutuswa ukwenza Biolaminirovanie izinwele.
Izimo for brondirovanie
Ngakho Izimo for brondirovanie cha, singabali ukungabekezelelani enjalo ngabanye of the ukwakheka upende. brondirovanie izinwele, ubuchwepheshe ngeke imaski iphutha ngokugqamisa nokufaka umbala, njengoba le nhlanganisela ngeke sifinyelele nomphumela ofiselekayo - umbala umdlalo. Futhi akudingekile ukuba wenze lokhu inqubo ku ezisontekile, noma wadalula wave zamakhemikhali.
Kwekhanda uValentina uPetrenko. Nokubukisa ku Duma State
Izinwele udayi izinwele ezimnyama: abakhiqizi, palette
Blonde With amashiya omnyama - Beauty noma alifaneleki?
Amathiphu zendlela yokwenza izinwele ngobuningi.
Izinto ezintsha e Gearbest: smartphone ezinhle engabizi izici ephezulu ekupheleni
Isimo nencazelo yobungane njengendlela yokutshela wena futhi uqonde imizwa yomnikazi wayo
Makalale Karelia ngesikhathi Meyi amaholide
Abantu bafunda sokwenziwa futhi obunamaparele namazinyo ngisho iminyaka 1600 edlule?